Tantara: Tao Amin’ny Efitra Ambony Rihana - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
IZAO dia ny alakamisy alina, roa andro tatỳ aoriana. Tonga teto amin’ity eﬁtra malalaka ambony rihana ity Jesosy sy ny apostoliny 12 mba hihinana ny sakafon’ny Paska. Ny lehilahy tazanao lasa dia i Jodasy Iskariota. Ho any amin’ny mpisorona izy mba hilaza ny fomba azon’izy ireo isamborana an’i Jesosy.
Vao ny omalin’iny, i Jodasy dia nankany amin’izy ireo ary nanontany hoe: ‘Inona no homenareo ahy raha manampy anareo aho hisambotra an’i Jesosy?’ Hoy izy ireo: ‘Sekely volafotsy telopolo.’ Koa lasa nankany amin’ireo olona ireo izao i Jodasy mba hahafahany hitarika azy ho any amin’i Jesosy. Moa ve tsy mahatsiravina izany?
Vita ny sakafon’ny Paska. Nefa manomboka sakafo manokana hafa iray izao i Jesosy. Nanolotra mofo ny apostoliny izy ary niteny hoe: ‘Hano ity, satria manambara ny tenako izay homena anareo.’ Avy eo dia nanolotra azy ireo kapoaka misy divay izy ary niteny hoe: ‘Sotroy ity, satria manambara ny rako, izay halatsaka ho anareo.’ Antsoin’ny Baiboly hoe ‘ny sakafo harivan’ny Tompo’ na ‘fanasan’ny Tompo’, izany.
Nihinana ny Paska ny Israelita mba hampahatsiaro azy ny fotoana ‘nandalovan’ny’ anjelin’Andriamanitra ny tranon’izy ireo tany Ejipta, nefa namonoany ny lahimatoa tao amin’ireo tranon’ny Ejipsianina. Izao anefa dia tian’i Jesosy ny mpanara-dia azy hahatsiaro azy, sy ny fomba nanomezany ny ainy ho azy ireo. Ary izany no antony nilazany tamin’izy ireo mba hankalaza io sakafo manokana io isan-taona.
Taorian’ny ﬁhinanana ny Sakafo Harivan’ny Tompo, i Jesosy dia nilaza tamin’ny apostoliny mba ho be herim-po sy hatanjaka ao amin’ny ﬁnoana. Farany, dia nihira ﬁhirana ho an’Andriamanitra izy ireo ary dia lasa. Efa alina be izao, angamba aorian’ny misasakalina. Aoka hojerentsika izay halehan’izy ireo.
Matio 26:14-30; Lioka 22:1-39; Jaona toko faha-13 ka hatramin’ny faha-17; 1 Korintianina 11:20.
Nahoana i Jesosy sy ny apostoliny 12 no nivory tao amin’ny eﬁtra malalaka iray ambony rihana, araka ny aseho eo amin’ny sary?
Iza ilay lehilahy lasa nivoaka, ary hanao inona izy?
Inona ilay sakafo manokana natombok’i Jesosy, taorian’ny sakafon’ny Paska?
Inona ilay ﬁsehoan-javatra notsarovan’ny Israelita isaky ny Paska? Inona kosa no hotsarovan’ny mpanara-dia an’i Jesosy amin’io sakafo manokana io?
Inona no nolazain’i Jesosy tamin’ny mpanara-dia azy, taorian’ilay Sakafo Harivan’ny Tompo, ary inona no nataon’izy ireo?
Vakio ny Matio 26:14-30.
Hazavao amin’ny alalan’ny Matio 26:15, fa ninia namadika an’i Jesosy i Jodasy.
Inona ireo antony roa nahatonga an’i Jesosy handatsaka ny rany? (Matio 26:27, 28; Jer. 31:31-33; Efes. 1:7; Heb. 9:19, 20)
Vakio ny Lioka 22:1-39.
Inona no tiana holazaina amin’ny hoe “Satana niditra tao amin’i Jodasy”? (Lioka 22:3; Jaona 13:2; Asa. 1:24, 25)
Vakio ny Jaona 13:1-20.
Tompon’andraikitra tamin’izay nataony ve i Jodasy, rehefa jerena ny Jaona 13:2? Inona no ianaran’ny mpanompon’Andriamanitra avy amin’izany? (Gen. 4:7; 2 Kor. 2:11; Gal. 6:1; Jak. 1:13, 14)
Inona no ohatra lehibe nomen’i Jesosy? (Jaona 13:15; Matio 23:11; 1 Pet. 2:21)
Vakio ny Jaona 17:1-26.
Nivavaka i Jesosy mba ho “iray” ny mpanara-dia azy. Inona no dikan’izany? (Jaona 17:11, 21-23; Rom. 13:8; 14:19; Kol. 3:14)
Nasain’i Jesosy nankalaza ny Fahatsiarovana ny mpanara-dia azy isaky ny 14 Nisana.